Ungayikhokha kanjani i-WhatsApp, noma ngabe isistimu yakho yokusebenza iyini | Izindaba zamagajethi
Ungayikhokha kanjani i-WhatsApp, noma ngabe isiphi isistimu yakho yokusebenza
Baningi abantu abangibuze emavikini adlule ukuthi ungayenza kanjani inkokhelo ye- € 0,89 ku- Isicelo se-whatsapp. Abasebenzisi abake baba kulesi simo bonke labo bangabapulatifomu be-Android nabasebenzisi abasha bohlelo ohlelweni lwe-iOS. Kusukela yaqala ukusebenza, i-WhatsApp ye-iOS ikhokhelwe, ngakho-ke abasebenzisi bokuqala ukuyilanda nokuyikhokhela baklonyeliswe ngunjiniyela wohlelo lokusebenza futhi bathola amalungelo esikhathi sokuphila.
Endabeni yabasebenzisi be I-Android ukuthi kusukela ekuqaleni ayizange ikhokhe lutho ngoba kulelo pulatifomu uhlelo lokusebenza belumahhala Futhi kubasebenzisi be-iOS abayilandile kungekudala, izinto ziyashintsha futhi kufanele badlule ebhokisini minyaka yonke nge- € 0,89 noma bathenga iphakethe leminyaka emibili noma emihlanu.
Ngamafuphi, ukuze wazi ukuthi ngabe isicelo onaso sizocela inkokhelo noma cha, kufanele uhambe, kokubili enguqulweni ye-Android nasenguqulweni ye-iOS eya izilungiselelo> i-akhawunti> imininingwane yokukhokha. Uma kwenzeka uphakathi kweqembu labasebenzisi okufanele bakhokhele isicelo, njengoba besilindele, kufanele ukhethe ukuthi ufuna ukukhokha unyaka, emibili noma emihlanu. Amanani entengo aphakathi kuka- € 0,89 wecala lokuqala, i- € 2,40 yesibili ne- € 3,34 yesithathu.
Inkinga iza lapho kufanele sikhokhe. Uma usohlelweni lwe-apula elilunyiwe, lena yi-iOS, ngaphakathi kolwazi lwe-akhawunti yakho ye-Apple unethuba lokufaka idatha yekhadi lesikweletu noma ledebhithi ngalo ufuna ukukhokha noma usebenzise ikhadi le-iTunes ongalithenga kunoma yisiphi isitolo esikhulu noma kumaPrimiyel Resellers. Lapho usuqedile inqubo yekhadi lesikweletu noma osebenzise imali ekhadini le-iTunes, ungakhokhela isicelo ngaphandle kwezinkinga.
Ukuze usebenzise ikhadi le-iTunes ungakwenza kusuka ku-iPhone ngokufaka uhlelo lwe-iTunes bese uskrolela phansi esikrinini phansi kwewindi. Uzobona inkinobho ethi "Sebenzisa". Enye indlela ivela kukhompyutha ene-iTunes. Lapho ufaka iSitolo, kukholamu yesokudla uzokwazi ukubona igama elithi «Shintshanisa ".
Endabeni ye-Android, inqubo ingenziwa yenza ngezindlela ezintathu ezihlukene, nge-Google Wallet, i-Paypal noma ngokuthumela isixhumanisi sokukhokha. Kumele kuqashelwe ukuthi uma usebenzisa inketho yokukhokha yeminyaka emi-3 unesaphulelo esingu-10% futhi uma ukhokha iminyaka emihlanu isaphulelo esingu-5%.
Inkokhelo nge I-Google Wallet ilingana nokukhokha sengathi siku-Google Play Futhi ngalokhu kufanele senze njengaku-iOS, ukufinyelela idatha ye-akhawunti yethu ukufaka ikhadi lesikweletu noma lasebhange noma usebenzise ikhadi le-Google Play ongalithenga, ikakhulukazi ezitolo zemidlalo yevidiyo. Ngibabonile esitolo seGame.
Uma sifuna khokha nge-PayPal, kuzofanele sikhethe leyo ndlela futhi phambilini, yi-akhawunti ye-PayPal nekhadi lesikweletu noma ledebhithi elizosetshenziswa.
Inketho yokugcina ukuthumela isixhumanisi sokukhokha ku-imeyili yethu futhi wenze inqubo yokukhokha kusuka kukhompyutha. Ngaphakathi kwaleyo imeyili sizonikezwa ithuba lokukhokha nge-Google Wallet noma nge-Paypal. Inketho elula ukukhetha I-Paypal futhi ngaphandle kwesidingo sokwakha i-akhawunti, izosicela imininingwane yekhadi futhi inkokhelo izokwenziwa kube sengathi kungukuthengiselana nekhadi kusuka kunoma iyiphi iwebhusayithi.
Njengoba ukwazi ukubona, kuyindlela elula kakhulu yokukhokha i- € 0,89 ngonyaka ejabulisayo ngohlelo lwakho lokusebenza olisebenzisa nsuku zonke. Manje kufanele ulandele izinyathelo esizibonisile bese ubona ukuthi ungayiqedela inqubo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungayikhokha kanjani i-WhatsApp, noma ngabe isiphi isistimu yakho yokusebenza
Ungawakha kanjani amafolda esitsha sohlelo ku-iOS 8
I-Online-PDF: Umphathi wedokhumenti oyi-Online ohamba phambili